မူလနရော » ကမျးခွေ,・ကြှနျး,・ကိတျ
Updated: 2016-10-03 14:35
Ainoshima ကျွန်း ( မီးညောင် လေး တို့ ရွာ )
Kokura ကနေ သင်္ဘောလေး စီး ပြီး ၊ ၃၅ မိနစ်လောက် နဲ့ လွယ်လွယ် ကူကူ သွားလို့ ရတဲ့ Ainoshima ကျွန်း ။ အိမ်ခြေ ၁၀၀ ခန့် သာ ရှိတဲ့ ထို ကျွန်းလေး ဟာ အကျယ် 0.7 square kilometers ခန့် သာ...
Updated: 2016-06-30 15:54
အဲနော့ ရှိ မ ကျွန်း( ခါနဂ၀ ဂျပန် )
လူငယ်များ နဲ့ မိသားစု အဖွဲ့ လိုက် တွေကြားမှာ အလွန် နာမည် ကြီး တဲ့ တောင်ပိုင်း ကန် အဲနော့ ရှိမ ကျွန်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခါမာခူရာ ကနေ အဲနော့ ရထား ကို စီးပြီး အဲ့နော့ရှိမ ဘူတာ မှာ ဆင်း ပြီး ကျွန်း ကိုလမ...
Updated: 2016-06-21 15:05
အိုဒိုင်းဘ ဟာ လူသိများ တဲ့ လည် ပတ် စရာ နေရာ တစ် ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းဘရှိ ဘူတာ ကနေ ( ရူရိခမိုမဲ ) စီး ပြီး သွား နိုင် ပါတယ်။ ရူရိခါမိုမဲ ရထား ဟာ သက်တန့် တံတား ( Minatoku Shibaura chiku နဲ့ အိုဒိုင်း ဘက...
Updated: 2016-06-16 14:37
အာမ ခုစာ တံတားငါး စင်း
ရှောဝ ၄၁ ခု နှစ် ၉ လပိုင်း မှာ ဖွင့်လှစ် ပေး ခဲ့ တဲ့ ခရူးရှူး ဟွန်းဒို နဲ့ အာမ ခုစာ ကျွန်းတို့ ကို ဆက် သွယ် ပေး ထား တဲ့ အရှည် ၁၂ ကီလိုမီတာရှိ သော တံတား ၅ စင်း ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ( အာမာခုစာ ပုလဲလ...
Updated: 2016-05-23 14:27
ဟဒို ချစ်သူများ ကျွန်း
ချစ် သူ များ ကျွန်း လို့ ခေါ် ဆို တဲ့ ဟဒိုမီစခိ ဟာ အသံ ပုံ စံ လေး က တည် ၇ှိ ပြီး ခါရစွတ် မြို့ ထဲ က နေ ကား နဲ့ ၁ နာ ရီ လောက် သွား ရတဲ့ နေ ရာ မှာ တည်ရှိ ပါတယ် ။ အသည်း ပုံ စံ အဆောက် အသီး လေး ဟာ ပင်...